Life style – Media Sharing
ခုချိန်ထိ ချစ်သူမရှိသေးလို့တဲ့ ပျိုမေတို့ လုံးဝ စိတ်မညစ်သင့်တဲ့ အကြောင်းပြချက်များ
ခုချိန်ထိ ချစ်သူမရှိသေးလို့တဲ့ ပျိုမေတို့ လုံးဝ စိတ်မညစ်သင့်တဲ့ အကြောင်းပြချက်များ အသက်လေးတစ်ခုရလာတာနဲ့ လူတွေအမေးများတဲ့ စကားက ခုချိန်ထိ တစ်ယောက်တည်းလား၊ ဘယ်တော့စားရမှာလဲ၊ ဂေါ်မစွံအပျိုကြီး ဖြစ်တော့မယ် စတဲ့ စကားတွေပေါ့။ ဒီလို စကားတွေကြောင့်နဲ့တော့ တွေ့ရာလူကို ချစ်သူတော်ပစ်လိုက်ချင်တဲ့ စိတ်တွေမဖြစ်ဖို့တော့ လိုပါတယ်နော် … ။ တကယ်တော့ ခုချိန်ထိ တစ်ယောက်တည်း နေနေရခြင်းမှာ
ကိုယ့်ကိုထားခဲ့ပြီး ထွက်သွားသူတွေကြောင့်ရလိုက်တဲ့ အဖိုးတန်သင်ခန်းစာ(၇)မျိုး
ကိုယ့်ကိုထားခဲ့ပြီး ထွက်သွားသူတွေကြောင့်ရလိုက်တဲ့ အဖိုးတန်သင်ခန်းစာ(၇)မျိုး လူတွေ ကိုယ့်ဘဝထဲကို ဝင်လာကြပြီး အချိန်တန်တော့လည်း ကိုယ့်ဘေးကနေပြန်ထွက်သွားကြတာ သဘာဝပါ။ ကိုယ့်ဘဝထဲဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေထဲမှာ ကိုယ့်အပေါ်ကောင်းတဲ့သူတွေလည်းပါလာသလို၊ ကိုယ့်အပေါ်မကောင်းတဲ့သူတွေလည်း ပါလာတာပါပဲ။ ကိုယ့်အပေါ်ကောင်းတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဆိုးတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ဘေးက သူတို့ ကိုယ့်ဘေးကထွက်သွားတဲ့အခါ ဒီလိုသင်ခန်းစာတွေကို ပေးသွားတတ်ကြပါတယ်။ ( ၁ ) လူတိုင်းကို မယုံတတ်အောင် သင်ပေးတယ် အခုခေတ်မှာ လူတော်တော်များများက
အားနာနာနဲ့ ခေါင်းငုံ့ခံတတ်တဲ့ အကျင့်ကို ပြင်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ
အားနာနာနဲ့ ခေါင်းငုံ့ခံတတ်တဲ့ အကျင့်ကို ပြင်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ သူများဆီမှာ ခေါင်းငုံခံတတ်တဲ့ သူတွေဆိုတာ အထူးသဖြင့် အားနာတတ်တဲ့သူတွေ ရှိသလို၊ တစ်ချို့က တစ်ဖက်လူနဲ့ အချင်းမများချင်လို့ အလျော့ပေးလိုက်တာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ တစ်ချို့တစ်လေကတော့ အရမ်းကိုကြောက်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်လို့ သူတစ်ပါး ဖိနှိပ်နေရင်တောင် ဘာမှပြန်မတုံ့ပြန်ရဲကြပါဘူး .. ။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဆိုရင်တော့ ဘဝကြီးမှာ အရှုံးတွေက ကိုယ့်အတွက်ချည်းဖြစ်နေပြီး ပျော်စရာတွေထက်
အမျိုးသားတွေေးလေးစားပြီးတန်ဖိုးထားရတဲ့ မိန်းကလေးတွေဆိုတာ ဒီလိုပါ
အမျိုးသားတွေေးလေးစားပြီးတန်ဖိုးထားရတဲ့ မိန်းကလေးတွေဆိုတာ ဒီလိုပါ ယနေ့ခေတ်ကြီးထဲမှာ အမျိုးသားတွေနဲ့ရင်ဘောင်တန်းနိုင်တဲ့ အရည်အချင်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာ တစ်စနဲ့တစ်စပေါ်ထွက်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် အမျိုးသားတွေဆိုတာလည်း အမျိုးသမီးတွေရဲ့အရည်အချင်းတွေကို အသိအမှတ်ပြုလာကြပြီး တန်ဖိုးထားလေးစားကာ တန်းတူဆက်ဆံလာကြပါပြီ … ။ လက်တွဲဖော်အဖြစ်ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်လည်း အရင်လို အိမ်မှုကိစ္စနိုင်နင်းပြီး ကလေးမွေးနိုင်မှဆိုတဲ့ စည်းဘောင်ထဲမှာဘဲ မစဉ်းစားတော့ဘဲ တခြားအရာတွေကို ပိုဦးစားပြီး စဉ်းစားလာတာကို ပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့ရမှာပါ။ အမျိုးသားတွေ အထင်ကြီးလေးစားပြီး
လူတွေရဲ့ အမြင်မှာ ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှု ပိုရှိတဲ့သူအဖြစ် မြင်ရစေနိုင်တဲ့ သတ်မှတ်ချက်များ
လူတွေရဲ့ အမြင်မှာ ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှု ပိုရှိတဲ့သူအဖြစ် မြင်ရစေနိုင်တဲ့ သတ်မှတ်ချက်များ တစ်ချို့လူတွေရဲ့ ပုံစံဟာ တစ်ခြားသူတွေထက် ပိုပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့ မြင်ရတတ်ပါတယ်။ စိတ်ပညာအရ လူတွေရဲ့ အမြင်ကို လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ ပိုဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့သူတွေအဖြစ် လူတွေသတ်မှတ်စေလောက်တဲ့ အချက်တွေရှိနေလို့ပါပဲ။ ဒီအချက်တွေက လူတစ်ယောက်ကို ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့သူအဖြစ် မြင်တတ်ကြပါတယ်။ (1) မျက်စိ သူငယ်အိမ် မျက်စိ သူငယ်အိမ်ရဲ့
သူလဲ သူ့အတ္တနဲ့သူ ပျော်နေမှာဖြစ်လို ကိုယ်လဲ ကိုယ့်မေတ္တာနဲ့ကိုယ် အေးချမ်းစွာနေပါ
သူလဲ သူ့အတ္တနဲ့သူ ပျော်နေမှာဖြစ်လို ကိုယ်လဲ ကိုယ့်မေတ္တာနဲ့ကိုယ် အေးချမ်းစွာနေပါ ကိုယ့်မေတ္တာနဲ့ကိုယ် အေးချမ်းနေမှာပါ …. ။ အနိုင်လို ချင်တဲ့ သူတွေကို ကျွန်တော် အမြဲ အရှုံးပေး ခဲ့တယ် အထက်စီ ကပဲ ဆက်ဆံချင် သူတွေကိုကျွန်တော် အမြဲ အောက်ကျို့ပေး ခဲ့တယ် ။ ဘဝင်မြင့်နေ တဲ့ သူတွေနဲ့တွေ့ရင်ကျွန်တော်
အမျိုးသမီးတွေ သဘောအကျတဲ့ အမျိုးသားတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများ အမျိုးသမီးတွေမှာ ဆွဲဆောင်မှုရှိတာ ဘာတွေလဲလို့ အမျိုးသားတွေကို မေးရင် မျက်နှာ၊ တင်ပါး၊ ရင်ဘတ်၊ ခြေထောက်၊ မျက်လုံး၊ အပြုံး စသည် စသည်ဖြင့် ပြောဆိုကြပါလိမ့်မယ်။ အမျိုးသမီးတွေကို သူတို့အမြင်မေးကြည့်တဲ့အခါ ဘယ်အမျိုးသားမှ ထင်မှတ်မထားတဲ့ တုံ့ပြန်မှုတွေ ကြားခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒါတွေက… (1) ကြွက်သား ကာယဗလလေ့ကျင့်သူတွေမှာ
ဘဝမှာထိပ်ဆုံးထိအောင်မြင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့အချက်များ လူတစ်ယောက်ဟာ တခြားသူတွေအပေါ်ကိုရိုးသားဖို့အရေးကြီးသလို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း ရိုးသားဖို့လိုပါတယ်။ ရိုးသားတဲ့သူဟာ ဘဝမှာ ထိပ်ဆုံးထိအောင်မြင်နိုင်ပြီး အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကလည်း ရေရှည်တည်မြဲနိုင်ပါတယ်..။ လူတစ်ယောက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရိုးသားမှုရှိဖို့ ၊ ထိပ်ဆုံးအထိအောင်မြင်ဖို့ဆိုရာမှာ ဒီအချက်တွေက အရေးကြီးဆုံးပါ..။ (၁) ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလက်ခံရမယ်..။ လူတစ်ယောက်က ကိုယ့်ဘဝကိုသိနားလည်ပြီး လက်ခံတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ့်ဘဝကိုအရှိအတိုင်းလက်ခံတတ်ပြီး ကြိုးစားခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်..။ ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုပြုပြင်၊ အားသာချက်တွေကိုအသုံးချပြီး မှန်ကန်တဲ့အောင်မြင်မှုကိုရအောင်
” စိတ်ထားကောင်းတဲ့ မိန်းကလေး ဖတ်ဖို့”
” စိတ်ထားကောင်းတဲ့ မိန်းကလေး ဖတ်ဖို့” စိတ်ထားကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးတွေက အချစ်ကံခေကြတာ များပါတယ်။ သင်က စိတ်ထားကောင်းတော့ သင်ချစ်ခဲ့ သူတွေကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဆက်ဆံ တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ကကျတော့ သင့်အပေါ် ဘာလို့ မကောင်းရ တာလဲ။ ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ ဆိုးတဲ့ယောက်ျားတွေ ချည်းပဲ ရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့
ဒီ(၁၀)ချက်ထဲက (၇)ချက်လောက်နဲ့ကိုက်ညီနေရင် သင်ဟာတကယ်ချောတဲ့ကောင်မလေးပါ
ဒီ(၁၀)ချက်ထဲက (၇)ချက်လောက်နဲ့ကိုက်ညီနေရင် သင်ဟာတကယ်ချောတဲ့ကောင်မလေးပါ အလှအပကို တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စံချိန်သတ်မှတ်ထားတာချင်းမတူညီပါဘူး … ။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ နိုင်ငံတကာက လူတွေတော်တော်များများက လှတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ စံချိန်လေးတွေပါ …. ။ သင်ဟာ ဒီအချက်တွေထဲက ၇ချက်နဲ့အထက် ကိုက်ညီနေရင်တော့ တကယ်ကိုလှပချောမောတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ (၁) သင့်မှာ မျက်ခုံးမွှေးဆွဲစရာမလိုလောက်အောင် လှပပြီးထူထဲတဲ့ မျက်ခုံးမွှေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ တစ်ခါတလေရိတ်ရတာကလွဲပြီး